10 hp qiimaha gawaarida korantada, 10 hp motar koronto oo la iibinayo
10 hp iibiyaha matoorka korantada oo qiimahoodu ugu fiican yahay
Ujeedada Guud ee '10' HP
Gawaarida Korontada ee Warshadaha
10 hp motor koronto, 10 hp motor koronto 12v, 5 hp motor koronto, 10 hp matoor koronto oo loogu talagalay compressorka hawada, 10 hp cabirka mashiinka korontada, 10 hp matoor koronto koronto, 10 hp motor koronto 3 wajiga amp sawir. Maaddaama aan nahay shirkad caalami ah oo matoorro koronto ku shaqeeya, waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo ah AC Motors iyo DC Motors.
Xuddunta sare ee korantada 10 hp, 10 hp motor koronto dc, Culeysyo buuxa oo buuxa oo ah 460 volts, 230 volts iyo 115 volts 10 hp koronto isku dhafan, 10 hp matoor koronto doon ah, 10 hp hal weji amps guud Guud Ujeedada Warshadaha Korontada , 10 hp motor koronto 12v, waxaan heysanaa 10 hp amp amp qiimeynta heerka korantada oo lamid ah 5 hp koronto, 10 hp matoor koronto hal waji, 10 hp culeyska korantada koronto waa 231 lbs. loogu talagalay 4 nooc tiir 10 mashiinka korantada ee kombaresarada hawada, 10 hp matoor koronto iib ah, 10 hp matoor koronto ku shaqeeya bilowga sare. 10 hp cabirka mashiinka korantada waa 38mm dhexroor iyo 80mm dheer. Wixii ah 10 hp motor koronto 3 wajiga amp amp ah, waxaan u soo direynaa mootada si wadajir ah.
qiimaha korontodeena koronto ee 10 hp waa mid aad u tartan badan iyo qiimaha qiimaha lagu iibsado matoor tamarta ku shaqeeya. Waan kaa caawin doonaa markaad dooranayso beddelka 10 koronto ee korantada loogu talagalay rarkaaga, bambooyin ama qalab kale. 10 hp matoor koronto 3 wajiga iibka ah, Si aad u ogaato inta uu le'eg yahay 10 koronto qiimaha korontada, fadlan nala soo xiriir isla markaaba.
10 hp cabirka miskaha korantada
10 hp qiimeynta gawaarida amp korantada
10 hp matoorka korantada ee loogu talagalay compressor-ka hawada
10 hp doonyaha matoorka korantada
10 hp matoorka korantada 12v
10 hp matoor koronto oo la iibinayo
Saddex Waji Qiyaasta Waxtarka leh ee 10 hp korontada 3 waji awood, iyo sidoo kale inay tahay 10 hp mashiinka korantada hal nooc soo saaraha ah. Qaar ka mid ah moodooyinka loogu talagalay mashiinka korontada dc 10hp ee aan sidoo kale bixin karno.
Sida mashiinka korontada ee 2 hp 1725 rpm hal weji, 3 hp koronto 1725 rpm hal weji, 1.5 hp matoor koronto hal weji waxaa loo isticmaali karaa waajibaadka beerta korantada 3 hp.
Kuwayagu way ka jaban yihiin qiimaha abb 10 hp, oo gebi ahaanba ku lifaaqan 10 hp motor koronto, 1000rm, 1750rpm, 3600 rpm iwm oo ah dhisme farsamo oo qallafsan. Si aad uhesho sicir gawaarida wajiga ah ee 10 hp 3 ah ee Shiinaha, ku soo dhawow inaad na weydiiso.
Ku soo dhowow Nala Soo Xiriir Markasta.